Muqdisho oo caawa laga seexan la'yahay iyo xaaladda oo aad u qasan.
on September 04 2013 Qaraxyo kala duwan iyo madaafiic ayaa caawa waxay ruxeen degmooyinka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, iyadoona qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwa lagu weeraray xarumo ay degan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Degmooyinka Hodan, H/wadaag, Wadajir, Yaaqshiid, Kaaraan iyo X/weyne ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa caawa ka wada dhacay qaraxyo iyo weeraro madaafiic, iyadoona qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday bambooyinka gacanta laga tuuro.
Sidoo kale waxaa weerar madaafiic ah lagu qaaday xarunta Xalane oo ah fariisinka ugu weyn oo ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale ay ciidankaasi jawaab ka bixinayeen weerarkaasi madaafiic ee lagu soo qaaday.
Gebi ahaan magaalada Muqdisho ayaa caawa waxaa ruxay qaraxyo iyo madaafiic, iyadoona ilaa iyo haatan aan la ogeyn qasaaraha rasmiga oo ay geeysteen qaraxyadaasi iyo madaafiicdaba.
Waxaynu isku daynay inaynu xiriir la sameeyno saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya balse waa inoo suurto gali weeysay, balse waxaan la xiriirnay wariyaal madax banaan ee ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka ay qaraxyada ka dhaceen.
Waxay inoo sheegeen in caawa xaaladda ay tahay mid aad u qasan islamarkaana aanay suurto gal ahayn in la ogaado qasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadaasi, waxaana magaalada Muqdisho ay wehel u noqotay qaraxyo iyo dilal, iyadoona hay'adda amaanka ee dowladda Soomaaliya aanay arinkaasi weli waxba ka qaban.
Wixii kusoo kordha warkaan kala soco wararkeena dambe Insha Allah.